Obama oo Booqanaya Malaysia
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho saddex maalmood ah ku jooga Malaysia, waana booqashadii ugu horeysey ee Madaxweyne Mareykan ah oo xafiiska haya uu ku tago dalkaasi ku dhowaad konton sanno.
Mr. Obama waxaa uu ka qeybgaley munaasabad casho sharaf ah oo lagu qabtey Kuala Lumpur. Boqorka Malaysia Abdul Halim ayaa Mr Obama u sheegay in dalkiisa uu uga mahadcelinayo Mareykanka taageerada iyo iskaashiga lagu baadigoobayo diyaaradda Malaysia ee ilaa haatan maqan.
Waxaa kale oo uu ka mahadceliyey iskaashiga xooggan ee dhanka dhaqaalaha ee labada dal ka dhexeeya, isagoo intaa ku darey in iskashigaasi uu ka caawin doono Malaysia inuu ka mid noqdo dalalka ugu horumarsan caalamka.
Mr. Obama ayaa la filayaa inuu ka qanciyo Raiisul Wasaare Najib Razak walaaca uu ka qabo heshiiska ganacsiga waddamada Pacific. Malaysia waxay xiriir ganacsi oo dhow la leedahay Shiinaha, waxaana ay ka soo horjeeddaa qeybo ka mid ah heshiiska.
Mr Obama waxaa uu Malaysia ka ambabixi doonaa Isniinta, isagoo ku sii jeeda Philippines, oo ah lugta ugu dambeysa ee socdaalka uu ku marayo afar dal oo uu uga gol leeyahay xoojinta xiriirka kala dhexeeya waddamada Asia.